ချိန်းတွေ့, ချစ်ခြင်း, ဆက်ဆံရေး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ချိန်းတွေ့, ချစ်ခြင်း, ဆက်ဆံရေး
အပေါ် Posted 19.09.2021 19.09.2021
လူများစွာသည် Blind Date ကိုကြားရသောအခါကြောက်ရွံ့ကြသော်လည်းစိတ်ပညာရှင်အများစုကအကြံပြုသည်။ အဓိကအရာသည်စည်းကမ်းအချို့ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
သစ္စာဖောက်သစ္စာဖောက် - နှိမ့် ချ၍ တိုက်ပါ။
အပေါ် Posted 16.09.2021 17.09.2021
စကားဝိုင်းတွင်လက်ထပ်ထားသော virtual လိင်၊ အတုမဲ့အချစ်၊ ပင်လျှင်ယခုဤအရာကိုသင်အံ့သြသွားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒီလို virtual အချစ်ကလက်တွေ့ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလဲ။
အပေါ် Posted 15.09.2021 15.09.2021
ခွဲခွာခြင်းသည်လွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်သော်လည်း "ချစ်သူ" နှင့်ခေါင်းကိုထုတ်ပစ်ရန် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသည်။ မင်းပြောရင်ငါသူ့ကိုမေ့သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူနဲ့အသိမိတ်ဆွေအသစ်တွေကြားထဲမှာယှဉ်ပြီးပြောပါ၊ သူ့ကိုဒေါသထွက်ပါ။ ဒါဆိုမင်းဒီလူကိုမမေ့သေးဘူးလား ...
အပေါ် Posted 15.08.2021 15.08.2021
တောက်ပ။ မမေ့နိုင်သော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအဆိုပြုချက်ကိုပြုလုပ်လိုလျှင်ဤဆောင်းပါးကိုသေချာဖတ်ပါ။
အပေါ် Posted 26.07.2021 26.07.2021
အမျိုးသားများအတွက်မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ အလေ့အကျင့်များနှင့်အပြုအမူများကဘာတွေလဲ။ အချက်အလက်အချို့သည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည်။
မင်္ဂလာဆောင်အတွက် Toastmaster - ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့?
အပေါ် Posted 25.07.2021 25.07.2021
မင်္ဂလာဆောင်အိမ်ရှင်သည်အဘယ်အရည်အသွေးများရှိသင့်သနည်း။ ငါဘာစဉ်းစားသင့်သလဲ မီးဖိုချောင်သုံးဆရာတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ ရှာကြစို့!
အပေါ် Posted 24.07.2021 24.07.2021
ဒီနေ့ခေတ်မှာလိင်ကိုကော်ဖီလိုလိုရရှိနိုင်ပေမယ့်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ကောင်မလေးဘယ်လိုသဘောရမလဲ မြင်းဖြူစီးနေတဲ့မင်းသားဖြစ်လာဖို့သူဟာပျော်စရာကောင်းရုံသာမကဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်။
ချိန်းတွေ့ခြင်း - အမျိုးသားများအတွက်ရိုးရှင်းသောအကြံပြုချက်များ
အပေါ် Posted 20.04.2021 20.04.2021
ရက်စွဲတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်သည့်အခါဗြောင်ကျကျအမှားများကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်နည်း။ "မြင်းပေါ်၌" ဖတ်ပြီးအမြဲတမ်းထားပါ
အပေါ် Posted 15.04.2021 15.04.2021
ဘ ၀ သည်လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်သင်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျှင်ကော ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ။ ဘာကိုရွေးချယ်ရမယ် - ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုလား။ ဤပြissueနာကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်အောင်ကြိုးစားပါမည်။
ရုံးအချစ်ဇာတ်လမ်း - ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်း ၇ ခု
အပေါ် Posted 14.04.2021 14.04.2021
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အများစုသည်အလုပ်ခွင်တွင်ကုန်လွန်သွားပြီးသင်ကသင်၏နှလုံးသားကိုအမိန့် ပေး၍ မရနိုင်ပါ၊ မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Office အချစ်ဇာတ်လမ်းများသည်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်းလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။
micro-change ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအန္တရာယ်လဲ။
အပေါ် Posted 03.04.2021 03.04.2021
micro-change ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ။ ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုရှာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပို။ ပြောလိမ့်မယ် ...
အပေါ် Posted 02.02.2021 02.02.2021
Nymphomania သည်အမြဲတမ်းလိုအပ်နေသောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားလိုအပ်ချက်အားလုံးထက် ပို၍ အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသားများတွင်မူဤရောဂါကို Satiriasis ဟုခေါ်သည်။ လိင်သည်သူမထိန်းချုပ်နိုင်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။
များစွာသောသူတို့သည်ဝေးလံသောဆက်ဆံရေးကိုမဖြစ်နိုင်ဟုယူဆကြသော်လည်းသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်နှင့်အဝေးတွင်နေလျှင်ဘာလုပ်ရမည် အခက်အခဲတွေ၊ အတူတကွနေထိုင်တဲ့သူတွေတောင်မှဆက်ဆံရေးဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အလှမ်းဝေးနေတယ်။
နမ်းတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မျက်စိပိတ်တာလဲ၊ သူတို့ဘာကြောင့်နမ်းတာလဲသူတို့မျက်စိပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုထပ်ခါတလဲလဲကြားနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုတိကျစွာဖြေဆိုရန်မဖြစ်နိုင်လောက်ပါ၊
လည်ပင်းပေါ်စုတ်ယူခြင်း - ပွင့်လင်းအတွက် eroticism
ခေတ်သစ်လူ့ဘောင်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်၏အမှတ်အသားများများစွာရှိသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကနှစ် ဦး အတွက်ဆွဲပြားအုပ်စုခွဲကျီ။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ချစ်ရသူရဲ့နာမည်နဲ့တက်တူးထိုးထားတယ်။ ထိုအခါမဆိုင်းမတွ, တစ် ဦး hickey ပေါ်တွင်တင်သူတွေကိုရှိပါတယ် ...
ပြင်သစ်အနမ်း: ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို? technique ကိုအပေါ်ရှစ်အကြံပေးချက်များ
ပါရီလူမျိုးများကို "ပြင်သစ်အနမ်းကဘယ်လိုလဲ" ဟုသင်မေးလျှင်သူတို့က "ချစ်သူများ၏စိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးသောအရာများကိုဖော်ပြရန်ခက်ခဲသည်!" ဟုဖြေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ငြင်းခုန်ရန်ခက်ခဲသည်! ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါဟာ ... ရုံပဲ။
ကမ္ဘာ့ကိန်းဂဏန်းများအရကွာရှင်းမှုအများစုသည်လက်ထပ်ခြင်း၏ပထမ ၅ နှစ် (သုံးပုံတစ်ပုံခန့်) တွင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်များအနက်အချိန်ကာလတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသူများအနက်တစ်ခုမှာအိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ၏ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်သည်။
ယောက်ျားအားလုံးကွဲပြားခြားနားကြပြီးလူတိုင်းကမိန်းကလေးများကိုကွဲပြားကြသည်။ အမျိုးသားများကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများတွင်တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသော်လည်း ... ၎င်းတို့ကို ဦး တည်ထားခြင်းဖြင့်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နုပျိုသောချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုမစဉ်းစားရအောင်၊
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 217 Next ကို 's Page